အီလီနွိုက်ပြည်နယ် Dispensary Applications ကို 2021 | HB 1443 အကျဉ်းချုပ်
ဆေးခြောက်လိုင်စင်ပိုများလာသည်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်နှင့်အတူလာနေသည် HB 1443 - ၎င်းသည်ဆေးခန်းလိုင်စင်သက်သက်အတွက်သာအကျုံးဝင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့အနက် ၁၂၀ သည်အီလီနွိုက်သို့လာလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့အနက် ၁၀၀% သည်လူမှုရေးသာတူညီမျှဖြစ်လိမ့်မည်။
110 ခုနှစ် 2021 နယူးအီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဆေးခန်းလိုင်စင်များ
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်ချက်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်လေ့လာနေသည်။ နောက်ထပ်ဘာဖြစ်မည်နည်း - ၀ န်ဆောင်မှုငှားရမ်းခြင်းများကိုညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏ webinar ကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤတွင် HB 1443 ၏အခြေခံသည်။
HB 1443 မှအီလီနွိုက်ဆေးခြောက်ဆေးခန်းလိုင်စင်များသို့အခြေခံပြင်ဆင်ချက်များ
ပြီးပြည့်စုံသောအမှတ်ပေးထီအတွက်လိုင်စင် ၇၅ ခု
“ အရည်အချင်းပြည့်မီသောလျှောက်ထားသူများ” ထီအတွက်လိုင်စင် ၅၅ ခု
“ အရည်အချင်းပြည့်မီသောလျှောက်ထားသူ” အားလုံးသည် Social Equity လျှောက်ထားသူများဖြစ်သည်
၁၀- FTE“ အရည်အချင်းပြည့်မီသောလျှောက်ထားသူများ” သည်“ လူမှုတန်းတူညီမျှမှုတရားမျှတမှုတွင်ပါ ၀ င်သောလျှောက်ထားသူများ” မဟုတ်ပါ
“ လူမှုရေးတန်းတူညီမျှမှုတရားမျှတမှုပါ ၀ င်သောလျှောက်ထားသူများ” ထီအတွက်လိုင်စင် ၅၅ ခု
5 (+1) လူမှုတန်းတူညီမျှမှုတရားမျှတမှုအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခွင့်လိုင်စင်ထီသည်ယခင်ထီများတွင်လိုင်စင်သုညအနိုင်ရသောလျှောက်ထားသူများဖြစ်သည်။
လူမှုသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများအတွက်ပြန်လည်သတ်မှတ်ထားသော 1500 ပေသည်အခြားဆေးရုံများအတွက်မလျှောက်ထားပါ
ကော်ပိုရိတ်ပိုင်ရှင်များအတွက်ပိုမိုထုတ်ဖော် - လိုက်နာမှုကုန်ကျစရိတ်
အီလီနွိုက်စ Cannabis ဥပဒေကိုပြင်ဆင်မှုအသစ်တွေမှာဥပဒေစည်းမျဉ်းအသစ်တွေကနေထပ်ဆင့်ထီတွေအထိ၊ ပိုများသောဆေးခန်းလိုင်စင်တွေအထိခွင့်ပြုချက်တွေရအောင်ဖြည့်ဆည်းဖို့ပါ။
“ အရည်အချင်းပြည့်မီသောလျှောက်ထားသူ” ဆိုသည်မှာပုဒ်မ ၁၅-၃၀ အရလျှောက်လွှာတင်သွင်းသူလျှောက်ထားသူ၏နောက်ဆုံးရမှတ်အဖြစ်ပုဒ်မ ၁၅-၃၀ အရရရှိနိုင်သည့်လျှောက်လွှာအမှတ် ၂၅၀ ၏အနည်းဆုံး ၈၅% ကိုရရှိသောလျှောက်လွှာတင်သူနှင့်“ လူမှုတန်းတူညီမျှမှုလျှောက်ထားသူ” ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်ကိုက်ညီသောလျှောက်ထားသူကိုဆိုသည်။ ထွက်ဤအပိုင်းကိုအောက်မှာ။
ခွင့်ပြုချက် - ဒီဆေးခြောက်လိုင်စင်အသစ်ကိုအီလီနွိုက်စ်ပြည်နယ်ကလူနည်းစုလူနည်းစုတွေအတွက်တရားဝင်အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟာကအထူးဥပဒေပြဌာန်းချက်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီ။ တန်ဘိုးရှိသည့်ဤပြည်နယ်အားဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်လျှောက်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရမှတ်၏ ၈၅% ကျော်ကိုရရှိခဲ့သည်။
၎င်းသည် ၁၃ သန်းနီးပါးရှိသောပြည်နယ်မှလူပေါင်း ၅၀၀ ကိုအကျိုးသက်ရောက်ရန်အထူးရေးသားထားသောဥပဒေဖြစ်သည်။ တန်းတူကာကွယ်မှုဆိုသည်မှာဥပဒေအောက်ရှိလူအနည်းငယ်မျှကိုဆုချပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုဆိုလိုတာလား။ အကယ်၍ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်သည်လိုင်စင်အတွက်စျေးနှုန်းနှင့်လိုင်စင်ကိုယ်နှိုက်၏တန်ဖိုးကိုအတုအယောင်တိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ကန့်သတ်ထားသောစျေးကွက်ကိုမဖန်တီးခဲ့လျှင်၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်လော။
မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အချက်အလက်များကိုအတည်ပြုရန်လုံးဝဘာမှမလုပ်ပါက၊ သို့သော်အရည်အချင်းပြည့်မီသောလျှောက်ထားသူများ၏လုံလောက်မှု - အနုပညာသက်တမ်းအသစ်သို့ပြောင်းကြပါစို့။
“ အရည်အချင်းပြည့်မှီသောလူမှုတရားမျှတမှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုပါ ၀ င်သောလျှောက်ထားသူ” ဆိုသည်မှာပုဒ်မ ၁၅-၃၀ အရလျှောက်လွှာတင်သွင်းသူလျှောက်ထားသူ၏နောက်ဆုံးရမှတ်အဖြစ်ပုဒ်မ ၁၅-၃၀ အရရရှိနိုင်သည့်လျှောက်လွှာအမှတ် ၂၅၀ မှအနည်းဆုံး ၈၅% ကိုရရှိပြီးလျှောက်ထားသူကိုဆိုလိုသည်။ ဤပုဒ်မအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း“ လူမှုသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူ” ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် ၁) (၂) ။
၎င်းသည်“ ကျွန်သခင်” အပိုဒ်ဟုလူသိများလာသည့်အချိန်ပြည့် ၀ န်ထမ်းများ၏လူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူ ၁၀ ဦး ကိုဖယ်ထုတ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်ယခင်အနုပညာသက်တမ်း၏သေးငယ်သည့်အပိုင်းတစ်ပိုင်းသို့လျှောက်ထားရန်နောက်ထပ်အနုပညာအသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အတူတကွလျှောက်ထားသောလျှောက်ထားသူနှစ် ဦး သည်မတူညီသောစုစုပေါင်းလိုင်စင် ၇၅ ခုကိုလျှောက်ထားသောယခုဆေးခန်းလိုင်စင်အသစ် ၁၂၀ အထိသီးသန့်ရရှိနိုင်သည်။ ဤလိုင်စင်များသည်စာရွက်တစ်ရွက်အတွက်အနည်းဆုံးဒေါ်လာတစ်သန်းတန်ဖိုးရှိဖွယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အခြားသူတစ် ဦး တစ်ယောက်အနေဖြင့်ပါ ၀ င်ရန်အခွင့်အရေးမရရှိပါကအခြားအရာတစ်ခုခုအတွက်လျှောက်ထားသူများကိုသာသွားနိုင်သည်လိုင်စင်တွင်ဒေါ်လာ ၁.၂ ဘီလီယံခန့်ရှိသည်။
ဤအကျိုးခံစားခွင့်ကိုရယူရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာအခြားအရာတစ်ခုအတွက်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ဆေးခြောက်လိုင်စင်အတွက်အမြဲတမ်းမကြာခဏလျှောက်ထားပြီးသင်ဒုတိယအကြိမ်စဉ်းစားရန်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။
ထို့ကြောင့်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောလျှောက်ထားသူသို့မဟုတ်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောလူမှုရေးတန်းတူညီမျှမှုတရားမျှတမှုပါ ၀ င်သောလျှောက်ထားသူတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကားအဘယ်နည်း။
ထိုအဖြေအတွက်ပုဒ်မ ၁၅-၃၅ အရထီအသစ်များအတွက်အချို့သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည် - နောက်ထပ်ဆေးခန်းလိုင်စင် ၁၁၀ ကိုထပ်မံပေးအပ်မည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအရည်အချင်းပြည့်မှီသောလျှောက်ထားသူများသည်လိုင်စင် ၅၅ ခုတွင်ရိုက်ချက်ကိုရရှိသည်။ သို့သော်မည်သည့်အသင်းကဤပြိုင်ပွဲတွင်လိုင်စင် ၂ ခုထက်မပိုနိုင်ပါ။ ထို့နောက်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောလူမှုရေးတန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုပါ ၀ င်သောလျှောက်ထားသူများသည်နောက်ထပ်လိုင်စင် ၅၅ ခုတွင်ရိုက်ချက်တစ်ခုရရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်အများဆုံးခွင့်ပြုချက် ၂ ခုအတွက်ကန့်သတ်ထားသည်။
ဒါကြောင့်လူမှုရေးသာတူညီမျှဝါရင့်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတစ် ဦး ဖြစ်သည့်ထူးခြားသည့်အမှတ်ပေးသူကိုယူကြစို့၊ သို့သော်သူတို့တွင်အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်း ၁၀ ဦး ရှိသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့သူတို့ကလိုင်စင် ၁၀ ခုအထိရနိုင်မယ့်ထီထိုးတယ်။ ထို့နောက်၎င်းတို့သည်အခြားသောအရည်အချင်းပြည့်မှီသောလျှောက်ထားသူထီထဲသို့ဝင်သွားကြပြီး ၁၀ လပတ်လိုင်စင်မရသေးသူများသည်နောက်ထပ် ၂ ခုအထိရနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောလူမှုတရားမျှတမှုပါ ၀ င်သောတရားမျှတမှုပါ ၀ င်သောလျှောက်ထားသူသည်နောက်ထပ်လိုင်စင် ၂ ခုထပ်မံရရှိရန်နောက်ထပ်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုရှိပါက ထပ်မံ၍ သူတို့ရဲ့ 10 လိုင်စင် ဦး ထုပ် hit မ။
လွတ်လပ်မှု၊ အခွင့်အလမ်းနှင့်တရားမျှတမှုအကြောင်းပြောဆိုပါ။ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်သည်၎င်း၏လူများအားလုံးကိုခေါ် ယူ၍ ဆေးခြောက်ဆေးခန်းလိုင်စင်ချီးမြှင့်ခြင်းအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီမှုမှ ၉၉% ကျော်ကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ လိုင်စင်ထောက်ပံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်သင်ကြိုးစားသောအခါဘာဖြစ်မည်ကိုကြည့်ပါ။ စျေးနှုန်းများတက်လာခြင်း၊ တရားစွဲမှုများပျံသန်းလာခြင်း၊ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည်သီးခြားအုပ်စုများကိုအကျိုးပြုသည်။ သင်၏မူဝါဒပန်းတိုင်သည်တရားမ ၀ င်စျေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးရန်ဖြစ်သည်ဆိုပါက၎င်းကိုပြီးမြောက်ရန်အတွက်လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်များသည်မှန်ကန်သောကိရိယာတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်စီးပွားရေးလုပ်ရန်စျေးနှုန်းများကိုမြင့်တက်စေလိမ့်မည်။
Social Equity လျှောက်ထားသူများသည်အခြားဆေးခန်းများမှပေ ၁၀၀၀၀ အကွာအဝေးမှကင်းလွတ်ခွင့်ရကြလိမ့်မည် - သို့သော်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ရှိဆေးခြောက်ဌာနခွဲများထက်ကြယ်ပေါင်းရာချီသောအခြားကြယ်ပွင့်များရှိသေးသည်ကိုစဉ်းစားခြင်းသည်အရေးမကြီးပါ။
၂၀၂၂၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ မတိုင်မီတွင်ထပ်မံထည့်သွင်းထားသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုခွင့်လိုင်စင် ၅၀ ကိုလည်း HB 1443 ကထောက်ပံ့ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်လာမည့်နှစ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်လျှောက်လွှာတင်သင့်သည်။ ယူဆရလူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများသာထိုလိုင်စင်ကိုရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
HB 1443 သည်နောက်ထပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်လိုင်စင် (၄ င်းတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုရန်တည်နေရာအတွက်အပေါင်း ၁ ပါ ၀ င်သည်) အတွက်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ဥပဒေ - ကွဲပြားခြားနားသောပြဌာန်းချက်ကိုပြင်ဆင်သည်။ ဤလိုင်စင် ၅ ခုသည်သာတူညီမျှတရားမျှတမှုပါ ၀ င်သောလျှောက်ထားသူများ၏ ပို၍ သေးငယ်သည့်ကဏ္subsခွဲသို့သွားသည်။ သို့သော်၎င်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်လိုင်စင်အသစ် ၅ ခုအတွက်လျှောက်လွှာအသစ်တစ်ခုဖြစ်မဖြစ်ကျွန်ုပ်မသေချာပါ။
၁၁၅ (က-၅) ကကျန်ရှိနေသည့်လိုင်စင် ၅ ခုကိုချီးမြှင့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည်လျှောက်ထားရန်နှင့်ယခင်ထီတွင်မည်သည့်လိုင်စင်မရရှိခဲ့သည့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောလျှောက်ထားသူများအတွက်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီတော့ဒီနွေရာသီမှာပထမဆုံးဆေးခန်းခွဲပေါင်း ၁၈၅ ခုကိုထီဖြင့်ဆုချပြီးနောက်မည်ကဲ့သို့ထွက်ခွာသွားသည်ကိုငါတို့ကြည့်ရပါလိမ့်မည်။
ပြီးတော့ဒါကဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာမင်းသိတယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ webinar လုပ်မယ် သင့်ရဲ့ဆေးခြောက်ငှားရမ်းညှိနှိုင်း အောင်မြင်မှုရရှိသူများကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဖွင့်လှစ်မည့်နေရာကိုရှာဖွေသောအခါမည်သို့ရှာဖွေရမည်ကိုပညာပေးရန်ဤနွေရာသီသည်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ရှိအခြေအနေတွင်ဆေးခန်းလိုင်စင်တွင်အိမ်ခြံမြေမရှိသောကြောင့်၎င်းနေရာကိုရှာရန်အနိုင်ရရှိပြီးရက် ၁၈၀ အလိုတွင်ရှိသည်။ ခင်ဗျားတို့ကိုကူညီပေးချင်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်လိုင်စင်ကန့်သတ်ချက်များကိုမထောက်ခံပါ၊ လူမှုတန်းတူညီမျှမှုကိုမစဉ်းစားပါကမည်သူမဆိုလိုင်စင်ရနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်၊ သို့သော်ဖမ်းဆီးခံရသူများသည်စက်မှုလုပ်ငန်းသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ချေးငွေနှင့်ထောက်ပံ့ငွေများရသင့်သည်။ ၄ င်း၏အသိုင်းအဝိုင်း၏လူ ဦး ရေကိုရောင်ပြန်ဟပ်သောကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၀ င်ရောက်မှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုအတွက်ကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်များပြားသောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ထိုရည်မှန်းချက်ကိုနောင်လာမည့်နှစ်များအတွက်ပျက်ပြားစေနိုင်သည့်ရှက်စရာဖြစ်သည်။
အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဆေးခန်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာများ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ခြွင်းချက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုရန်ခွဲဝေပေးသောအဖွဲ့အစည်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာ၏ဒြပ်စင် ၃၀ တွင်တစ်ခုချင်းစီပါ ၀ င်ခဲ့သော်လည်းအီလီနွိုက်ပြည်နယ်ပြည်နယ်မှလျှောက်ထားသူများအတွက်ရမှတ် ၂၅၀ ကိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့်ထိုလျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ပါ။ အဘို့သင့်အသင်း အရွယ်ရောက်ပြီးသူသုံးဆေးခန်းလိုင်စင် ရမှတ်၏အမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်ကြောင့်မတူကွဲပြားသောအသင်းတစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုရှိသောကုမ္ပဏီတွင်ပေါင်းစည်းထားခြင်းကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသည်။
လျှောက်လွှာများသည် KPMG မှရမှတ်များနှင့်တရားစွဲဆိုမှုများကိုဆိုင်းငံ့ထားဆဲဖြစ်သည်။ ဒုတိယအကြိမ်တွင်ယခုစတင်ပါ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အီလီနွိုက်နားဆေးရုံများအတွက်လိုင်စင် ၁၁၀ ထပ်တိုးသောအခါသင်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဆေးခန်းလျှောက်လွှာ 2020 PDF ကို
ဘယ်လိုလဲ ဆေးခန်းဆိုင်ရာလျှောက်လွှာများ ၂၀၂၀ တွင်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်၌ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့
၀ န်ထမ်းများ၏သင်တန်းအစီအစဉ် (၁၅ ချက်) ။
လုံခြုံရေးနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (၆၅ မှတ်)
စီးပွားရေးစီမံကိန်း၊ ဘဏ္ancာရေး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်အထပ်စီမံကိန်း (၆၅ မှတ်)
ဆေးခြောက်နှင့်ဆက်စပ်လယ်ကွင်းများတွင်ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံ (အမှတ် ၃၀)
လူမှုသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူအဖြစ်အဆင့် (အမှတ် ၅၀)
အလုပ်သမားနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ (၅ မှတ်)
အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ပိုင်ရှင် (၅ မှတ်)
ဝါရင့်အဖြစ်အခြေအနေ (5 မှတ်)
မတူကွဲပြားခြင်းအစီအစဉ် (၅ မှတ်)
ရပ်ရွာအကျိုးခံစားခွင့်အစီအစဉ်အတွက်ဆက်သွယ်မှုအတွက်အပိုဆုကြေး ၂ ခု
ခြွင်းချက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုမှုဆေးခန်းဥပဒေ၏အမှန်တကယ်စာသားကိုဖတ်ပါ -> IllInois အရွယ်ရောက်သူကိုသုံးသောဆေးခန်းဥပဒေ
A: သင့်တွင်ဆေးခြောက်ဆေးခန်းလိုင်စင်အတွက်သင့်တော်သောအဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းတွင်လူမှုရေးတန်းတူညီမျှမှု၊ အရင်းအနှီး၊ အတွေ့အကြုံနှင့်ရပ်ရွာလူထုပါ ၀ င်ပြီးရှေ့နေနှင့်စာရင်းကိုင်ကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးအတွက်။ လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတည်းအတွက် $ 100,000 ကျော်ဘတ်ဂျက်။ ထိုအခါသင်သည်အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာရှိသည်မျှော်လင့်ပါတယ်, ထီဘို့ကောက်ယူရ။
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အီလီနွိုက်သည်ဆေးခြောက်ဆေးခန်းလိုင်စင်အသစ် ၇၅ ခုကိုချီးမြှင့်သည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်သည်နောက်ထပ်ဆေးခြောက်ဆေးခန်းလိုင်စင် ၁၁၀ ကိုချီးမြှင့်သည်
အစောပိုင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ဌာနသည်နောက်ထပ်ဆေးခြောက် ၁၁၀ ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
ဟုမရှိဘဲဒါဟာဝင် အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အတွက်အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်တရားဝင် သံသယမရှိဘဲဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုမှုတစ်ခုတိုးဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ငွေကြေးတန်ဖိုးကိုရရှိရန်နှင့်ဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များသည်လက်ထဲတွင်မကျရောက်စေရန်အတွက်ပြည်နယ်သည်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ရှိဆေးခြောက်ဆေးခန်းများကိုအုပ်ချုပ်ရန်အတွက်ဥပဒေများချမှတ်ခဲ့သည်။ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အပန်းဖြေလိုင်စင်လျှောက်လွှာသည်သူတို့လိုက်နာသင့်သည်။
အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်၏အသေးစိတ်ကိုကြည့်ပါ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဆေးခြောက်ဆေးခန်းဥပဒေများ။ ရဲ့ညာဘက်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ကြပါစို့?
အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဥပဒေအသစ်အရ၊ ဆေးရုံများသည်“ ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ထောင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူများထံမှထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းရန်လိုအပ်သည်၊ သို့မှသာမည်သည့်စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ ဆေးထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း၊ ရောင်းရန်ရရှိနိုင်သည့်စုစုပေါင်းစာရင်း၏ ၄၀% ကျော်” ။
ဆိုလိုသည်မှာစားသုံးသူများသည်ဆေးခန်းတစ်ခုတည်းမှရွေးချယ်ရန်အလုံအလောက်ရှိလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်စိုက်ပျိုးရေးစင်တာများနှင့်အခြားစိုက်ပျိုးသူများအား၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုသီးသန့်သိုလှောင်ထားသည့်ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်းများတည်ထောင်ခြင်းကိုတားဆီးသည်။ တူညီသောမှတ်စုတွင်၊ ဆေးခန်းတစ်ခုသည်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောတောင်သူများသို့မဟုတ်စိုက်ပျိုးသူများ၏ထုတ်ကုန်များကိုသိုလှောင်ရန်ငြင်းဆန်ခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်။
အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ရှိလိုင်စင်ရဆေးခြောက်ဆေးရုံများမှတစ်ဆင့်ကားဖြင့်သွားသောပြတင်းပေါက်များကိုဖွင့်ရန်၊ ဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များတင်ပို့ခြင်းကိုလည်း၎င်းတို့အားတားမြစ်လိမ့်မည်။ ဆေးခန်းအားလုံးတွင်လည်ပတ်ရေးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ရောင်းချမည့်ပစ္စည်းကိရိယာများရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဆေးခန်းတိုင်းတွင်အနည်းဆုံးလူနှစ် ဦး ပါ ၀ င်သင့်သည်။
ဆေးခန်းများတွင်ဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးသိုလှောင်ထားနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့အား“ ကိုယ်ပွားများသို့မဟုတ်အခြားသက်ရှိအပင်ပစ္စည်းများကိုရောင်း” ခွင့်မပြုပါ။ ထို့အပြင်ထုတ်ကုန်များအားလုံးကိုတစ် ဦး ချင်းစီရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီးစျေးနှုန်းတစ်ခုတည်းအတွက်အတူတကွစုစည်းထားမည်မဟုတ်ပါ။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကို“ ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းအရေအတွက်နှင့်စျေးနှုန်းအားဖြင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်။
ဆေးခန်းမှဝန်ထမ်းတစ် ဦး သည်ဆေးခြောက်ဥပဒေများနှင့်ဘေးကင်းရေးကိုသေချာစေရန်အတွက်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ချက်များကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောလုံခြုံရေးအစီအမံများတွင်သင့်လျော်သောစာရင်းကိုင်ခြင်း၊ ဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များခိုးယူခြင်းကိုတားဆီးရန်လုံခြုံရေးနှင့်၎င်းတို့အားရောင်းချသည်အထိသိုလှောင်မှုအားလုံးကိုခြေရာခံသည့်အစီအစဉ်တို့ပါ ၀ င်သည်။
ဆေးရုံဆေးခန်းတစ်ခုစီတွင်ပြည့်စုံသောအစီအစဉ်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ “ လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွင်ပုဂ္ဂလိကစုံထောက်၊ ပုဒ်မ ၁၀ - ၅ အရလိုင်စင်ချထားသောပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးကန်ထရိုက်တာ၊ ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေး၊ ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေး၊ ဆေးခန်းဝင်းအတွင်းလုံခြုံမှုကိုပေး။
ဆေးခန်း၏စီးပွားရေးစီမံချက်သည်စတိုးဆိုင်ကိုရေတိုနှင့်ရေရှည်တွင်မည်သို့စီမံခန့်ခွဲရမည်ကိုအသေးစိတ်လမ်းညွှန်ပါလိမ့်မည်။ “ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအစီအစဉ်တွင်အနည်းဆုံးနေ့စဉ်သုံးဆေးခန်းနှင့် ၀ န်ထမ်းများအတွက်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များပါ ၀ င်ရမည်။ ”
အဆိုပါ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆေးခြောက်ဆေးခန်း ၀ န်ထမ်းများမည်သို့ဆက်ဆံရမည်ကိုဖော်ပြရန်လည်းလိုအပ်လိမ့်မည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစည်းကမ်းချက်များနှင့် ၀ န်ထမ်းအားလုံးအတွက်လုပ်ငန်းခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်များပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်စီစဉ်ထားသောကုမ္ပဏီများအတွက်အချက်များပိုမိုရရှိလိမ့်မည်။
ဌာနခွဲများအားလုံးသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခွင့်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးလိုခြင်းမရှိပါကလိုင်စင်ဌာနသို့ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရန်လိုအပ်သည်။ ဤအကြောင်းကြားစာအတွက်ခွင့်ပြုသည့်ကာလသည်ပိတ်သိမ်းသည့်နေ့ရက်မတိုင်မီအနည်းဆုံး ၃ လဖြစ်သည်။
ဆေးခန်းများပိတ်သိမ်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုတည်ထောင်ရန်အတွက်လိုင်စင်ဌာနနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤအစီအစဉ်သည်အနည်းဆုံးစီးပွားရေးမှတ်တမ်းများလွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များနှင့် ဦး စီးဌာနသည်လိုအပ်သောအခြားအရာများကိုလွှဲပြောင်းပေးခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေ၊ ရဲနှင့်လိုင်စင်ဌာနသည်ပြည်နယ်အတွင်းရှိဆေးခြောက်ဆေးခန်းများသို့ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိသောစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ထို့အပြင်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိများသည်ဆေးခြောက်နှင့်သက်ဆိုင်သောထုတ်ကုန်များ၊ ပစ္စည်းများနှင့်မှတ်တမ်းများကိုကြည့်ရှုခွင့်ရှိသည်။
ဆေးရုံဆေးခန်းသည်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်သည်ဟုသံသယရှိပါကစွပ်စွဲချက်များရှိပါကဌာနသည်လျှောက်ထားသူ၊ လျှောက်လွှာအသေးစိတ်၊ သာသနာအဖွဲ့အစည်း၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ဆေးခန်း၊ တတိယပါတီရောင်းချသူ၊ တစ် ဦး dispensing အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူ "။
အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဆေးခြောက်အက်ဥပဒေအရ“ ဌာနအနေဖြင့်အသေးစားချိုးဖောက်မှုများအတွက်စည်းကမ်းမဲ့အရေးယူမှုများကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်” ဤကိုးကားချက်များသည်ချိုးဖောက်မှုတိုင်းအတွက်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ ထက်မပိုသောဒဏ်ငွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ဆေးရုံဆေးခန်းလိုင်စင်ရသူအားကောက်ခံပါမည်။ လိုင်စင်ရသူအနေဖြင့်ရည်ညွှန်းကိုပြသည့် နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းကြားနာမှုအတွက်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ဤအချိန်ကုန်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရည်ညွှန်းသည်နောက်ဆုံးဖြစ်လာပြီးအငြင်းပွားမှုမဖြစ်နိုင်ပါ။
ဥပဒေအရလိုင်စင်ဌာနသည်“ မည်သည့်လိုင်စင်ကိုမဆိုဆန့်ကျင်သောစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးသို့မဟုတ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာအရေးယူမှုများကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ငြင်းဆိုခြင်း၊ အပြစ်ပေးခြင်း၊ ဆေးခန်းများမှဥပဒေကိုချိုးဖောက်နိုင်သည့်နည်းလမ်းအချို့မှာ -
အများပြည်သူအားထိခိုက်စေနိုင်သောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအပြုအမူများတွင်ပါဝင်ခြင်း။ အများပြည်သူထံမှမည်သူမဆိုဆေးခန်းမှမကျေနပ်သောအပြုအမူများကိုသတင်းပို့နိုင်သည်။ တရား ၀ င်အရာရှိများသည်ထိုတောင်းဆိုမှုများအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
ဌာနသည်ဆေးခန်းတစ်ခု၏စစ်ဆင်ရေးများကိုလည်းရပ်ဆိုင်းရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဆိုင်းငံ့အသိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်လိုင်စင်ရသူသည် ၄၅ ရက်အတွင်းကြားနာမှုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဌာနအနေဖြင့်ဤတောင်းဆိုချက်ကိုမလိုက်နာပါက ၄၅ ရက်ကုန်သွားသည်နှင့်ဆိုင်းငံ့လိုင်စင်ကိုအလိုအလျောက်ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိခြင်းအပြင်၊ အီလီနွိုက်စ်ဆေးခန်းလိုင်စင်လိုအပ်ချက်များသည်ဆေးခန်းများထူထောင်လိုသူများသည်ဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သည်။ ဤလိုအပ်ချက်အချို့မှာ -
အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဆေးခန်းလိုင်စင်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းသက်သေပြနိုင်လျှင်လူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများသည်ရမှတ် ၅၀ အထိရလိမ့်မည်။ လူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများသည်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ရန်သီးသန့်ဖယ်ထားသည့် kitty ထံမှရန်ပုံငွေများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်သည်။
ခြွင်းချက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Illinois ပြည်နယ်ရှိဆေးခန်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာများကိုဖွင့်ပါ
အဲဒီမှာသင်ကရှိသည်! ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ဆေးခြောက်ဆေးခန်းများကိုအုပ်ချုပ်မည့်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဆေးခြောက်ဆေးခန်းဥပဒေများပြိုကွဲသွားသည်။ ဤဥပဒေများသည်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေသော်လည်းဆေးဝါးလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပိုင်ရှင်များနှင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
ဗွီဒီယိုနှင့် podcast မှ script ဖြစ်သည်။
ကွိုဆို, ငါတွမ်ပါ၊ Cannabis ရှေ့နေ googling ဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုရှာပါ။ ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုသွားရန်သင်၏မေးခွန်းများအတွက်အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ် - Illinois ရှိယနေ့လူကြိုက်များသောခေါင်းစဉ် - ဆေးခန်းလိုင်စင်အသစ်။ လာမည့်နှစ်များအတွင်းအီလီနွိုက်ဆေးခြောက်ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်သူအသစ် ၅၀၀ အထိကိုဖွင့်ပေးမည့်လျှောက်လွှာများကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသွားပါမည်။
လူများအားအသုံးပြုမှုကိုခွဲဝေပေးသောအဖွဲ့အစည်းလိုင်စင်ကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သုံးစွဲရန်ဤအချက်အလက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လူများကိုကူညီရန် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအမည်မှာအမှန်ဖြစ်သည်။ ) အီလီနွိုက်ပြည်နယ်လူကြီးအသုံးပြုမှုဥပဒေ၏ပုဒ်မ ၁၅-၂၅ - အကြိုက်များကိုဖျက်စီးပြီးစာရင်းသွင်းပါ။ လျှောက်လွှာကိုသာမကဘဲသင်ရွေးချယ်ရမည့်သင်၏အခွင့်အလမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်မည်သို့သွင်းယူသည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဖုံးလွှမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
အဆုံးတိုင်အောင်စောင့်ကြည့်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှာစီးပွားရေးအတွက်ဆေးခန်းဘယ်နှစ်ယောက်ဖွင့်မယ်ဆိုတာငါပြောမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီအမျိုးအစား ၂ ခုရှိတယ်။
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ဦး စီးဌာနသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည် - ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ဆေးခန်းအသစ်လိုင်စင် ၇၅ ခုကိုထုတ်ပေးပါ။ ၂၀၂၁၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ဦး စီးဌာနသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသုံးစွဲခွင့်လိုင်စင် ၁၁၀ ကိုထပ်မံထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင်ဆေးရုံဆေးခန်း၏အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ အမြဲတမ်း ပို၍ ဖြစ်လာသည် - သို့သော်ပြည်နယ်အတွင်းရှိဆေးခန်းအသစ် ၅၀၀ ထက်မပိုစေရ။ ပိုပြီးထောက်ပံ့ရေးမလိုအပ်လျှင်။ အခြားဗီဒီယိုများအတွက်ပိုမို။
ဒါကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးခြွင်းချက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုမှုဆေးခန်းများအတွက်သူတို့အားလိုင်စင်လျှောက်ထားသို့အဘယ်သို့သွားရမယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပြောကြကုန်အံ့။
ပထမ ဦး စွာ - ဥပဒေအရဆေးခန်းများခွဲဝေမှုကိုပထ ၀ ီအနေအထားအရပြန့်ပွားစေသည်။ ပထမလှိုင်းအတွက်မည်သူရရှိသနည်းစာရင်းကိုအောက်တွင်ဖော်ပြပါ။ အကယ်၍ သင် Outlier သို့မဟုတ်နှစ်ခုတွေ့နိုင်သည်၊ peoria ၃ ရရှိသောအခါ bloomington တစ်ခုတည်းကိုသာရနိုင်သည် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုအာမခံအရောင်းအ ၀ ယ်များထက်ကျွန်ုပ်တို့ ပို၍ အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်ပြီး၊ ချီကာဂိုareaရိယာသည် ၄၇ ရရှိသည်။
ပုဒ်မ ၁၅-၂၅ ရှိမျဉ်းကိုဖယ်ရှားခြင်း - လျှောက်လွှာအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။ လျှောက်လွှာကိုမည်သို့သွင်းမည်ကိုမှန်ဘီလူးဖြင့်ကြည့်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆေးခြောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၅-၃၀ (ဂ) မှစတင်သည်။
ပြီးပြည့်စုံသောလျှောက်လွှာများအတွက်အမှတ် ၂၅၀ ရလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ပြည်နယ်ကအနိုင်ရရှိသူများကိုရွေးချယ်သည်။ ဒီမှာအချက်အချာကျသည် - လုံခြုံရေးနှင့်မှတ်တမ်းတင် 65 မှတ်။ သင်၏အချက်များအားလုံး၏ ၂၅% သည်လုံခြုံရေးနှင့်မှတ်တမ်းများမှလာသည်။ မှန်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် client မှတ်တမ်းများကိုကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့ရပြီ၊ သင်၏မှတ်တမ်းများသည်မည်မျှကောင်းမွန်သနည်း Jeffery? ဒီအကြောင်းကိုဂျက်ဖရီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးကိုမင်းကြည့်ရတာမင်းကိုငါလွတ်မြောက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
နည်းတူအရေးကြီးတယ် လုံခြုံရေးနှင့်မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းသည် Business Pla၊ ဘဏ္ialsာရေး၊ Operating နှင့် Floor အစီအစဉ် ၆၅ မှတ်ဖြစ်သည်။ ဤဆေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအချို့အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးခြောက်တရားဝင်သတင်းများပေါ်တွင်ဗီဒီယိုများပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ညှိနှိုင်းရန် subscribe ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ အကယ်၍ သင်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ထဲ၌ဤအချက်များကိုသိရှိထားပါကကျွန်ုပ်သည်ဆေးခြောက်လုပ်ငန်း၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုလွတ်လပ်စွာဆက်သွယ်ပါ။ ရှေ့နေနှင့်ငါ့ကိုဖုန်းခေါ်ပေးပါ
ယခုထက်ပိုပြီးနှင့် ဆေးခြောက်ဆေးခန်းလိုင်စင်အတွက်ချီးမြှင့်သည့်အမှတ်များ၏ ၅၀%သင်၏လျှောက်လွှာတွင်အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပါမည်။ Social Equity လျှောက်ထားသူအခြေအနေ - ဤဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗွီဒီယိုကိုညှိပါ။ တန်ဖိုး ၅၀ ရတယ်။ ဆေးခြောက်သည်အသင်းအဖွဲ့အားကစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးအီလီနွိုက်ပြည်နယ်၏တရားဝင်ဆေးခြောက်ဈေးကွက်တွင်အသင်းဝင်များမှာလူမှုရေးသာတူညီမျှဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အမြဲပြောခဲ့သည်။
ပြီးရင်3ကိုသွားမယ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံအတွက်0မှတ် - လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်တာကာလအတွင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးသည်ကျွန်ုပ်၏ကဒ်ရရှိခဲ့ပြီး၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်သူများယခုထွက်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အရေးကြီးသည်မှာအရေးကြီးသည်။ ထို့အပြင်လက်မှုပညာသည်ပိုမိုကြီးထွားလာစေလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ယာဉ်ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ဆေးခန်းများအကြားဒီတော့ကြောင်း Synergy ကိုရှာဖွေပါ။
အထွေထွေကိစ္စရပ်များသို့မရောက်မီနောက်ဆုံးဂဏန်းနှစ်လုံးပါ ၀ င်သော ၀ န်ထမ်းသင်တန်းအစီအစဉ်သည် ၁၅ မှတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လျှောက်လွှာအောက်တွင်လည်းလိုအပ်ပြီး၎င်းတို့အားအတူတကွထားရန်အလွန်စျေးကြီးရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စည်းမျဉ်းများနှင့်ဥပဒေများကိုနားလည်ရန် ၀ န်ထမ်းများကိုလေ့ကျင့်ရန်သတိရပါ။ ထိုမူဝါဒများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်အကူအညီလိုလျှင်ငါ့ကိုပြောပြပါ။
အိုကေ။ ကြည့်ရအောင် - အဆ ၆၀ ၂ + ၅၀ + ၃၀ + ၁၅ = ၂၁၅ ဖြစ်လို့ကျန်တဲ့ ၃၅ မှတ်ကိုအထွေထွေလို့ခေါ်တယ်။
အလုပ်သမားနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ - ၅ မှတ်
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံချက် - ၅ မှတ်
အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ပိုင်ရှင် (၅၁%) - ၅ မှတ်
51 မှတ် - ဝါရင့် 5% ပိုင်ဆိုင်သည်
မတူကွဲပြားခြင်းအစီအစဉ် - ၅ မှတ်နှင့်စကားလုံး ၂၅၀၀
ထိုနေရာတွင်သင်သည်မှတ်မှတ် ၂၅၀ ရှိသော်လည်းရပ်ရွာနှင့်ထိတွေ့မှုပြုလုပ်ရန်အစီအစဉ်အတွက် ၂ မှတ်ရမှတ် ၂၅၂ ရမှတ်ရှိသည်။ သငျသညျထိုသူအပေါင်းတို့သည်ရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ခြွင်းချက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုရန်ဆေးခန်းလိုင်စင်၏ဒြပ်စင် ၃၀ မှတစ်ခုချင်းစီကိုဖြတ်ကျော်မည့်အစားဤဗီဒီယိုကို ၁၀ မိနစ်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်အဆုံးသတ်လိုသည်။ Linked'in နဲ့ဒီ script ကိုသူတို့ပိုကြိုက်တဲ့ဆောင်းပါးတခုလို။ ဒါက youtube ထက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ပလက်ဖောင်းဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့၊ ငါ့ရဲ့ဆက်နွယ်မှုနဲ့ငါ့နောက်ကိုလိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖော်ပြချက်ထဲမှာဆက်စပ်နေတယ်။
ဒြပ်စင် ၃၀ တွင်မပါသည့်အရာတစ်ခု - လိပ်စာ - သင်ရွေးယူလျှင်သင့်ပြည်နယ်ကိုပြည်နယ်သို့ပေးပို့ရန် ၆ လရှိသည်။
ယခုဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင်ဆေးခန်းမည်မျှဖွင့်မည်နည်း။ ၅၅ မှ ၁၁၀ အကြားရှိသည်။ လက်ရှိဆေးပေးခန်း ၅၅ ခုသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအတွက်ဒုတိယနေရာမှဖွင့်ရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ နံပါတ်များဇန်နဝါရီလလာကြည့်ဖို့မစောင့်နိုင်ပါ။
ငါ့ကိုဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာပါ ၀ င်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဆေးခြောက်တရားဝင်မှုဟာလအနည်းငယ်သာကြာပြီဆိုတာမှတ်ထားပါ။ ဒါကြောင့်ဆေးခန်းနှင့်စာရင်းသွင်းခြင်းအတွက်သင်၏အစီအစဉ်ကိုအတူတကွစတင်ပါ။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏အကူအညီလိုလျှင်, google ဆေးခြောက်ရှေ့နေ go နှင့်ငါနှင့်အတူဆက်သွယ်ပါ။ မကြာခင်ပြန်ဆုံကြမယ်။
ဤတွင် Cannabis တရားဝင်သတင်းကိုရယူရန်
နယူးမက္ကစီကိုတွင် Cannabis စီးပွားရေးလိုင်စင်ရရန်
by Tom | မေလ 31, 2021 | နယူးမက္ကစီကိုတွင်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလိုင်စင်
နယူးမက္ကစီကိုတွင်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရန်သင်နယူးမက္ကစီကိုတွင်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရယူရမည်နည်း။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 2ပြီ ၁၂ ရက်တွင်ပြသခဲ့သော House Bill 12 မှတစ်ဆင့်နယူးမက္ကစီကိုသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသုံးဆေးခြောက်များကိုတရားဝင်နှင့်တရားဝင်ဝယ်ယူခဲ့သည်။
by Tom | မေလ 28, 2021 | မီချီဂန်၌ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလိုင်စင်
မီချီဂန်၌ Marijuana စီးပွားရေးလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရနိုင်မည်နည်း ၂၀၂၁ မတ်လမှစ၍ မီချီဂန်သည်အပန်းဖြေဆေးခြောက်အတွက်လျှောက်လွှာများကိုစတင်လက်ခံခဲ့သည်။ မီချီဂန်၌ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရယူရမည်ကိုသင်သိလိုလျှင်၊ မဟာရေကန်ပြည်နယ် ...
by Tom | မေလ 27, 2021 | မက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်လုပ်ငန်းလိုင်စင်
မက်ဆာချူးဆက်တွင်မာရီဂျူနာစီးပွားရေးလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရရှိနိုင်သနည်းသင်မက်ဆာချူးဆက်တွင်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရယူရမည်ကိုသင်သိလိုပါကပြည်နယ်ရှိအရွယ်ရောက်သူသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုံးဆေးခြောက်ကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုသင်သတိပြုသင့်သည်။ မက်ဆာချူးဆက်တွင်တရားဝင် ...
by Tom | မေလ 26, 2021 | ဗာဂျီးနီးယားဆေးခြောက်တည်ထောင်ခွင့်လိုင်စင်များ
Virginia Social Equity ဆေးခြောက်လိုင်စင်ဗာဂျီးနီးယား၏အထွေထွေညီလာခံသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်7ပြီလ ၇ ရက်နေ့တွင်ဗာဂျီးနီးယားရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူသုံးဆေးခြောက်များကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သော House Bill 2021 ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ဥပဒေကြမ်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင်စတင်သက်ရောက်သည်။
by Tom | မေလ 26, 2021 | ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ကယ်လီဖိုးနီးယား
ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိဆေးခြောက်စီးပွားရေးလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရနိုင်မည်နည်းကယ်လီဖိုးနီးယားရှိဆေးခြောက်စက်ရုံသည်လူကြိုက်များသောကြောင့်ဆေးခြောက်လှုပ်ရှားမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်လည်း၎င်းပါ ၀ င်လိုပါကဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမည်သို့ရနိုင်မည်ကိုသင်စဉ်းစားမိနိုင်သည်။
by ဒီယေဂို | မေလ 21, 2021 | Uncategorized